ကားမှာပါတဲ့ ECU, ECM, PCM, TCM, BCM ဆိုတာတွေဟာ ဘာတွေကို ခေါ်တာလဲ?
အခုနောက်ပိုင်း ကျနော်တို့ ကားလောကမှာ ကားမောင်းတဲ့သူတွေရော ၊ ကားပြုပြင်တဲ့သူတွေရော မဖြစ်မနေ သိရမယ့် အကြောင်းအရာတခုက ကားမှာပါတဲ့ Control System တွေပါ ။ တချို့ ကြားဖူးနား၀ လည်း ရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခု ကားမှာပါတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Control System တွေရဲ့ အကြောင်း နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။
ECU နဲ့ ECM
ECU နဲ့ ECM ဆိုတဲ့ ကားကွန်ပျူတာဘောက်လို့ လူသိများတဲ့ အရာပါ။ တချို့က ECU (Engine Control Unit) လို့ခေါ်ပြီး တချို့ကလည်း ECM (Engine Control Module) လို့ခေါ်ကြပါတယ် ။ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ECU ဒါမှမဟုတ် ECM ခေါ်ကြပေမယ့် Electronic နည်းပညာသုံး Microprocessorလို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပျူတာ ဦးနှောက်တွေနဲ့ ကားရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းတွေကို ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တူတူပါပဲ။
ဒီ ECU, ECM တို့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံက ကားအင်ဂျင်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆင်ဆာအမျိုးမျိုး (Coolant Temperature Sensor, MAP Sensor, Mass AirFlow Sensor, Knock Sensor, CrankShaft Position Sensor, O2 Sensor , etc…) ကနေ ပေးပို့တဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်း ရယူပြီး ကားမှာရှိတဲ့ Spark Plugs တွေ၊ Fuel Injectors တွေ အစရှိတဲ့ Actuator တွေကို လိုအပ်တဲ့ ဆီပေး မီးပေးစနစ်တွေကို ပြန်လည်ခိုင်းစေ အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ ဒီလို ECU တွေအသုံးပြု ကားထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်ကို EFI (Electronic Fuel Injection) စနစ်လို့ခေါ်ဆိုပြီး ဟိုးအရင်ခေတ်ဟောင်းကားတွေနဲ့ မတူ မီးတိုင်ပင်အမျိုး၊ ဆီအနည်းအများ၊ အင်ဂျင်လည်ပတ်မှု အနှေးအမြန် စတာတွေကို ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ လိုတိုးပိုလျော့လုပ်နိုင်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
TCM ဆိုတာကတော့ Transmission Control Module ဖြစ်ပြီး အခုခေတ်ပေါ်ကားတွေမှာပါတဲ့ အော်တို ဂီယာလို့ခေါ်တဲ့ Automatic Transmission (ဂီယာဘောက်) တွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်ကိုခေါ်တာပါ။ ဟိုးအရင်ခေတ်ဟောင်း Manual ကားတွေမှာတော့ ဂီယာဘောက်တွေကို ကားမောင်းသူကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ အခုခေတ်မှာတော့ ဒီ TCM တွေက ကားရဲ့ အရှိန် လမ်းအနေအထား အနိမ့်အမြင့်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ဂီယာအချိန်းအပြု အနှေးအမြန်တွေကို အင်ဂျင်ရဲ့ ဝန်အားနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေအောင် ဆီစား သက်သာအောင် အလိုအလျောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးတဲ့ Control Module တခုပါ။
ဒီ TCM ကလည်း Wheel Speed Sensors တွေ၊ Throttle Position Sensor (လေတံခါး ဆန်ဆာ) ၊ Transmission Fluid Temperature Sensor (အော်တိုင်ဝိုင် အပူချိန် ဆန်ဆာ) တွေကနေလာတဲ့ ဒေတာ အချက်အလက်တွေကို လက်ခံရယူပြီး ကားကို အညင်သာဆုံး အလျင်မြန်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်အောင် ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ပေးပါတယ်။ တချို့ကားတွေမှာတော့ TCM သီးသန့်မပါဝင်ဘဲ ECU ကနေပဲ ထိန်းချုပ် မောင်းနှင်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။
(ဂီယာဘောက်နှင့် TCM ပုံ)
PCM ဆိုတာကတော့ Power Train Control Module ကိုခေါ်ဆိုတာပါ။ PCM ဆိုတာ အလွယ်ကူဆုံး နားလည်အောင် ပြောပြရရင် ECU နဲ့ TCM ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ ကားတစ်စီးရဲ့အရေးပါဆုံး ပါဝါထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ အင်ဂျင်ရယ် ဂီယာဘောက်ရယ် နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထားတာကို PCM လို့ခေါ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် PCM မှာ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ charging system, variable valve timing, idle speed, ignition timing, fuel injection, exhaust system အစရှိတာတွေပါဝင်သလို ABS System တွေ Wheel Speed Sensor တွေကစလို့ အော်တိုဂီယာဘောက်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ရယူမှုတွေ ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုရော ဒီတစ်ခုတည်းကနေ လုပ်ပေးတာပါ။
BCM ဆိုတာကတော့ Body Control Module ဆိုတဲ့ အရာဖြစ်ပြီး ကားမှာရှိတဲ့ Body Electrical နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေကို ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်တဲ့ စနစ်တခုပါ။ ဒီ BCM က ကားရဲ့ ECU တို့ PCM တို့ဆီကနေ အမိန့်ပေးစေခိုင်းချက်တွေကို အဆင့်ဆင့်ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ ဂိတ်တံခါးတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒီ BCM က အင်ဂျင်ပိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေတာ မလုပ်ဘဲ ကားမှာပါတဲ့ Power Window တွေ၊ Door Lock တွေ၊ Security စနစ်တွေ၊ ရှေ့မီး နောက်မီး အတွင်းခန်းမီးစတာတွေ၊ ကားရဲ့ Wiper Motor တွေ အစရှိတဲ့ ကားမှာပါတဲ့ Electrical နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(Body Control Module ပုံ)
ECU တွေ၊ PCM တွေ၊ TCM တွေ၊ BCM တွေ ဘာကြောင့် ပျက်နိုင်သလဲ?
ကားမှာပါတဲ့ ECU တွေ TCM တွေရဲ့ အလုပ်က ကားမှာပါတဲ့ ပါဝါပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆင်ဆာတွေရဲ့ သတင်းအချက်လက်တွေကိုယူပြီး ကားရဲ့ ဆီပိုင်း၊ မီးပိုင်း၊ လေပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး သူတို့ အလုပ်လုပ်နေတာ မှန်မမှန် ဘယ်နေရာမှာ ချို့ယွင်းနေတယ်ဆိုတာတွေကိုပါကြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ချက်မီးတွေကို ကားရဲ့ ဒိုင်ခွက်မှာဖော်ပြပေးပါတယ်။ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင် ချက်မီး၊ ABS နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ABS, VSC, TRC မီး၊ Battery အိုးပုံ၊ Charging မီးစသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မီးတွေကို ဒိုင်ခွက်မှာ ဖော်ပြပြီး OBD2လို့ခေါ်တဲ့ (Onboard Diagnostics) စက်တွေနဲ့ စစ်ဆေး အဖြေရှာလို့ ရအောင် သက်ဆိုင်ရာ Trouble Code တွေကို ဖော်ပြပေးတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင် ပါသေးတယ် ။
ECU တွေ၊ TCM တွေ၊ PCM တွေပျက်စီးသွားရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ ကားအင်ဂျင်ပိုင်း ဆီလေ အချိုး မမှန်တာတွေ၊ ဂီယာဆောင့်တာတွေ၊ အင်ဂျင်တုန်တာတွေ၊ လီဘာနင်းမရတာတွေ၊ Misfire လို့ခေါ်တဲ့ မီးပေးမမှန်တာတွေကစလို့ ဂီယာလုံး၀ မဝင်တော့တာ၊ အင်ဂျင်စက်နှိုးလို့ မရတော့တာတွေ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင်တော့ ECU တွေကို အသစ်လဲလှယ်တာ၊ ဖြုတ်ပြီး အတွင်းပိုင်း ဆားကစ်တွေကို ပြုပြင်တာတွေ လုပ်ရပါမယ်။
ECU တွေ TCM တွေအပျက်များစေတဲ့ အကြောင်းကတော့ ရေဝင်တာ၊ ဝါယာကြိုးလိုင်း ရှော့ဖြစ်တာ၊ ဘတ္ထရီအိုး အပေါင်းအနှုတ်မှားတပ်တာ၊ ဘတ္ထရီမှားထောက်တာ၊ ECU Pin out တွေကို ကျောက်လှည့် Tester ခေါ် Ampere များများဆွဲတဲ့ မီးစမ်း Tester တွေနဲ့ စမ်းသပ်တာ၊
ပုံမှန် ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ မလုပ်ဘဲ မပြုပြင်ဘဲ ကားကို လုံးဝထိုးရပ်ပျက်စီးတဲ့အထိ ပေမောင်းတာ အစရှိတဲ့ အချက်တွေက ECU တွေ PCM တွေအစရှိတဲ့ Control Unit တွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ အဖြစ်များတဲ့ အခြေခံအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုခေတ် မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေရဲ့ ECU, TCM အစရှိတဲ့ Control Module တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းက သိန်းဂဏန်းကနေ သိန်းဆယ်ဂဏန်းအထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ Control Unit တွေအပျက်အစီး သက်သာအောင် ကားမှာ မူမမှန်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ တွေ့တယ်ဆိုတာနဲ့ အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း ဖြင့် ကားရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Control Unit တွေပါ ပျက်စီးမယ့် အခြေအနေကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါ မယ်လို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Yangon Payment Service (YPS) ကတ်ဖြင့်ငွေပေးချေစီးနင်းနိုင်မည့် ယာဉ်လိုင်းများ
ဩဂုတ်လ ဒုတိယပတ်အတွင်း YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် ခရီးသည်လိုက်ပါစီးနင်းမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် ၁.၁ သန်းခန့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ